Tag: xogta xisbiga koowaad | Martech Zone
Tag: xogta xisbiga koowaad
Talaado, Agoosto 18, 2020 Wednesday, September 22, 2021 Douglas Karr
Maalin kasta, malaayiin Mareykan ah ayaa raacda gawaaridooda oo taga. Shidaal siinta wadayaasha gaadiidka, ganacsiga, iyo iskuxirka; waana marka ay GSTV leedahay feejignaantooda aan la kala qaybin. Maalin kasta, tobanaan kun oo goobood, shabakadooda fiidiyowga ee qaran waxay leeyihiin daqiiqad gaar ah oo muhiim ah, marka macaamiisha ay ku hawlan yihiin, soo dhaweynayaan, kharash badan ku bixinayaan maanta oo ay saameyn ku leeyihiin berri iyo wixii ka dambeeya. Xaqiiqdii, GSTV wuxuu gaaraa 1 3dii XNUMX qof oo qaangaar ah oo Mareykan ah bil kasta, isagoo ku mashquuliya daawadayaasha aragti buuxa, dhawaq, iyo dhaqdhaqaaq
Wayin Ayaa Bilaabay Hillaaca Tooska Ah Sheekooyin Bulsheed
Tuesday, April 3, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Xayeysiinta dhijitaalka ah ayaa gaadhay meel dhibic ah. 50% dadka qaangaarka ah waxay si firfircoon uga fogaadaan xayeysiinta mobilada iyo desktop-ka halka 47% kalena ay si firfircoon uga fogaadaan xayeysiiska app-ka ku jira Kuwani waa lambarrada wadaya aaladda Wayin, Sheekooyinka Bulshada, oo ah aalad muhiim u ah suuqleyda sumadda leh iyo kuwa wax xayeysiiya. Maanta, haddii adeegsadayaasha Instagram ay gujiyaan ama ku dhaafeen Sheeko La Isboonsariyay, waxay inta badan qaadataa shan ilbidhiqsi oo buuxa oo ah bogga calaamaddu inuu ku shubto gudaha barnaamijka. Isticmaalayaasha moobiilku waxay helayaan dulqaad la'aan, jahwareer iyo
3 Meelaha Isbedelka loogu talagalay Nidaamyada Dalbashada ee 2017
Arbacada, Janaayo 18, 2017 Arbacada, Janaayo 18, 2017 Ivan Roubstov
Waa aamin in la dhaho 2016 waxay noqotay su'aalaha boostada halkii ilbidhiqsi (QPS) ee loogu talagalay Baahida loo qabo Dhinacyada (DSP) iyo xalalka iibsiga ee warbaahinta. Hadday DSP wadi karto aragtida 500,000 oo dareen / ilbiriqsi ama 3 milyan oo aragti ah / ilbidhiqsi ah, helitaanka iibsiga ayaa noqday mid aan ka yareyn kala-duwanaanta tartame ee dhammaan marinnada iibsiga ee warbaahinta. Maanta, noocyada badankood waxay u maleynayaan in DSPs ay tahay inay si otomaatig ah ugu dhex milmaan dhammaan is-weydaarsiga xayeysiiska ah iyagoo ugu yaraan gaarsiinaya gudbinta kanaalka oo ugu yaraan
Saameynta Suuqgeynta ee Qeybta Koowaad iyo Xogta-Saddexaad
Talaado, Juun 23, 2015 Douglas Karr
In kasta oo suuqleyda xogta kexeysa ay ku tiirsan yihiin xogta dhinac saddexaad, daraasad cusub oo ay soo saartay Econsultancy iyo Signal ayaa muujineysa isbeddelka warshadaha. Daraasadu waxay ogaatay in 81% suuqleyda ka warbixineysa inay ka helaan ROI-ga ugu sareeya qorshooyinka ay wataan marka ay isticmaalayaan xogta qeybta koowaad (marka loo barbardhigo 71% ee asxaabtooda guud) iyadoo kaliya 61% ay xusayaan xogta qeybta seddexaad. Isbeddelkan ayaa la filayaa inuu sii qoto dheeraado, iyadoo 82% dhammaan suuqleyda la daraaseeyay ay qorsheynayeen inay kordhiyaan